ဒီဇိုင်းအသစ် 1P, 2P, 3P, 4P, 125A လက်စွဲပြောင်းမှုပြောင်းပြောင်းခြင်း
AS (M) -125 စီးရီးတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်လည်ပတ်မှုလက်စွဲပုံမှန်လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများ 1. လေထုအပူချိန်မှာ -5 ℃ ～ + 40 ℃, ပျမ်းမျှတန်ဖိုးသည် ၂၄ နာရီအတွင်း ၃၅ over ထက်မကျော်လွန်သင့်ပေ။ 2. ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆကို max အပူချိန် + ၄၀ at တွင် ၅၀% ထက်မပိုစေသင့်ပါ။ ပိုမိုမြင့်မားသောစိုထိုင်းဆကိုအောက်ပိုင်းတွင်ခွင့်ပြုထားသည်။
အဘယ်ကြောင့် Zinc အောက်ဆိုဒ်အလင်းရောင် arrester လူကြိုက်များသလဲ
Zinc Oxide light arrester သည်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများအား lightening သို့မဟုတ် switching လုပ်ငန်းများကြောင့်ဖြစ်သည့် over-voltage အမျိုးမျိုးမှကာကွယ်ရန်အသုံးပြုသည်။ (Zinc Oxide light arrester line ကို အသုံးပြု၍) Surge arresters သည်ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးဗို့အားကာကွယ်သည့် protector protector ဖြစ်ပြီး၊ metal-oxide (MO) ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ...
Self-healing အကြောင်း Shunt Power Capacitor အမျိုးအစား
B (S) MJ capacitor ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ - Self-healing အမျိုးအစား Shunt Power Capacitor ကို 50Hz သို့မဟုတ် 60Hz power system တွင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်သည်။ , voltage voltage အရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေပါ။ △ထရန်စဖော်မာပမာဏနှင့်တူးဖော်ရန်ဏ ...
ဒီဇိုင်း 16A မှ 100A 4P မှအလိုအလျောက်ပြောင်းလဲရန်ပြောင်းခြင်းသို့
General ASIQ dual power switch (နောင်တွင် Switch ဟုခေါ်သည်) သည်အရေးပေါ်အခြေအနေတွင်ပါဝါကိုဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သောခလုတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ switch မှာ load switch တစ်ခုနှင့် controller တစ်ခုပါဝင်တယ်။ အဓိကအားဖြင့် main power supply သို့မဟုတ် standby power supply သည်ပုံမှန်ဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးရန်အဓိကအသုံးပြုသည်။ ဘယ်အချိန်မှာ ...
ပထမလ၏ပထမဆုံးနေ့ကိုရှေးခေတ်နွေ ဦး ရာသီဟုမခေါ်ဘဲနှစ်သစ်ကူးနေ့ဖြစ်သည်။ ၂။ တရုတ်သမိုင်းတွင် `နွေ ဦး ပွဲတော် the ဟူသောစကားလုံးသည်ပွဲတော်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။
KEMA သည်ဒတ်ခ်ျအတိုကောက် (Keuring Van Elektrotechnische Materialen) ဖြစ်သည်။ KEMA ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်သည်တဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့လာခဲ့ပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစွမ်းအင် ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွင် ဦး ဆောင်နေသည့်လွတ်လပ်သောအာဏာပိုင်ဖြစ်လာသည်။ KEMA သည်ဖောက်သည်များ၏အပြောင်းအလဲ၏ ဦး တည်ရာကိုခန့်မှန်းရန်အနှစ် ၈၀ ကျော်ကူညီခဲ့သည်။
အပြင်ဘက် 33kV 35kV 36kV 1250A Vacuum Circuit Breaker သည်လက်ရှိထရန်စဖော်မာနှင့်အတူ
ထရန်စဖော်မာနှင့်အပြင်ဘက်တွင် 33kV 35kV 36kV 1250A Vacuum Circuit Breaker ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ကိုကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည် - ၄၀ ℃မှ ၄၀ ℃ရှိသည်။ ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ အခမဲ့ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ကြာရှည်သောသက်တမ်းသည် overhead lines၊ စက်မှုနှင့်သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းများ၊ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၊
လက်ရှိ Transformer ဖြင့်လျှပ်စစ်မီတာတပ်ဆင်ခြင်း၏အားသာချက်များနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ
မီတာကိုအဘယ်ကြောင့်ထရန်စဖော်မာနှင့်တပ်ဆင်သင့်သနည်း။ ဤသည်မီတာကိုမီးရှို့ခြင်းနှင့်ပိုက်ဆံချွေတာရှောင်ရှားရန်ဖြစ်ပါသည်။ ပိုက်ဆံချွေတာသည့်အနေဖြင့်၊ လက်ရှိမီတာသေးငယ်သည့်အတွက်ထရန်စဖော်မာနှင့်လက်ရှိမီတာတစ်ခု၏စျေးနှုန်းထက်နည်းမည်။ လျှပ်စစ်မီတာ၏လုံခြုံရေးရှုထောင့်မှ ...
လူတစ် ဦး မှတစ် ဦး သို့ကူးစက်နိုင်သည်။ အဓိကအားဖြင့်လူတစ် ဦး မှတစ် ဦး သို့ကူးစက်နိုင်သည်။ အနီးကပ်အဆက်အသွယ်ရှိသူများအကြား (၂ မီတာခန့်) ။ ရောဂါကူးစက်ခံရသူမှချောင်းဆိုးခြင်း၊ နှာချေခြင်းသို့မဟုတ်စကားပြောသောအခါအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအစက်များ။ ဒီရေစက်ရေတွေဟာပါးစပ်ထဲဒါမှမဟုတ်နှာခေါင်းထဲကျသွားနိုင်တယ်။
ဒီဇိုင်းအသစ် 1P, 2P, 3P, 4P, 125A လက်စွဲ Chan ...
ကိုယ်တိုင်ကုသခြင်းအကြောင်း Shunt Power Capac ...
ဒီဇိုင်းသစ် 16A မှ 100A 4P အလိုအလျောက် Chang ...